ओकिनावा को सर्वश्रेष्ठ! नाहा, मियाकोजीमा, ईशिगाकिजीमा, टेकटोमिजिमा आदि। Best of Japan
यदि तपाईं जापानको सुन्दर समुद्रीतट दृश्यको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ भने उत्तम सिफारिश गरिएको क्षेत्र ओकिनावा हो। ओकिनावा क्युशुको दक्षिणमा अवस्थित छन्। यसले उत्तर-दक्षिण km०० किमी र पश्चिमदेखि १,००० किलोमिटरको विशाल पानीमा विविध टापुहरू समावेश गर्दछ। त्यहाँ कोरल रीफहरू, क्रिस्टल स्पष्ट निलो महासागर, सेतो बालुवा समुद्र तट, र सुन्दर प्राकृतिक दृश्यहरू छन्। अद्वितीय Ryukyu संस्कृति पनि आकर्षक छ। यस पृष्ठमा, म ओकिनावामा सबैभन्दा सिफारिश गरिएका पर्यटन स्थलहरूको परिचय दिनेछु।
के तपाई ओकिनावा जानु भएको छ? त्यहाँ जीवन, संस्कृति र सुन्दर प्रकृति छन् जुन टोकियो भन्दा बिल्कुल भिन्न छन्। किन तपाईं अर्को जापान फेला पार्न यात्रामा जानुहुन्न? सामग्रीको तालिका ओकिनावाका ओकिनावा म्यापका फोटोहरू ओकिनावाका फोटोहरू इशिगाकी टापुको सफा सागर, ओकिनावा = शटरस्टक ...
ओकिनावा मुख्य टापु
कास्टनेट = शटरस्टकसँग ओकिनावा पारम्परिक नृत्य
ओकिनावा क्षेत्रलाई व्यापक रूपमा तीन टापु समूहमा विभाजित गरिएको छ, ओकिनावा मुख्य टापु वरपर ओकिनावा टापु, मियाकोजिमा टापु वरपर मियाको टापु र ईशिगाकिजीमा टापु वरपर यायामा टापुहरू।
त्यसोभए, ओकिनावामा यात्रा गर्दा, तपाईंले आफ्नो यात्रा निर्णय गर्नुपर्नेछ, चाहे तपाईं ओकिनावा मुख्य टापुमा बस्नुहुनेछ, दुबै ओकिनावा मुख्य टापु र अर्को दुर्गम टापुको आनन्द लिनुहोस्, वा टाढाको टापुमा बस्नुहुनेछ।
ओकिनावाको कुल जनसंख्या करीव १.1.45 मिलियन मानिस छन्, जस मध्ये करीव% ०% ओकिनावा मुख्य टापुमा बस्छन्। ओकिनावा मुख्य टापु करिब 90 470० किलोमिटर वरपर रहेको छ र लामो समयदेखि दक्षिणमा मुख्य रूपले विकसित भएको छ। प्रिफेक्चुरल राजधानी यस द्वीपको दक्षिण, नाहा शहरमा अवस्थित छ। यस टापुको उत्तरी भागमा, तपाईं जंगली प्रकृति पाउनुहुनेछ।
त्यसोभए, यदि तपाइँ ओकिनावा मुख्य टापुमा बस्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो यात्रा योजना तय गर्नुपर्नेछ, दक्षिणमा बस्न वा उत्तरी / मध्य क्षेत्रको रिसोर्टमा बस्नुहोस्।
मैले निम्न लेखमा ओकिनावामा सबैभन्दा सुन्दर समुद्र तटहरू परिचय गर्‍यो। यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, कृपया तलको लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
ओकिनावा, जापानमा नाहा एयरपोर्ट = शटरस्टक
दुई ओकिनावा मोनोरेल १००० श्रृंखला ट्रेनहरू नाहा, ओकिनावा, जापानको गिबो स्टेशनमा पार हुँदैछ = शटरस्टक
ओकिनावाको मुख्य एयरपोर्ट ओकिनावा मुख्य टापुको दक्षिणी भागमा नाहा एयरपोर्ट हो। यस एयरपोर्टमा, निर्धारित उडानहरू निम्न एयरपोर्टहरूसँग सञ्चालन हुन्छन्।
बैंकक / सुवर्णभूमि
ओकिनावा रयुक्यू शैलीको छत शासा पौराणिक सिंह कुकुरको शिल्पकलाको साथ ओकिनावा टापु, जापानमा = शटरस्टक
घरेलु उडानहरू (ओकिनावा बाहिर)
होक्काइडो · तोहोकु क्षेत्र
सप्पोरो / नयाँ Chitose, सेंडाई
नागोया / चुबु, शिजुओका, निगाता, कोमात्सु
ओकायामा, हिरोशिमा, इवाकुनी, तकामात्सु, मत्सुयामा
किटक्याशु, फुकुओका, नागासाकी, कुमामोटो, मियाजाकी, कागोशिमा, अमामी, टोकुनोशिमा, ओकिनोएराबु, तर्क
घरेलु उडानहरू (ओकिनावा)
कुमेजिमा, किता-डेइटो, मिनामी-डेइटो, मियाको, ईशिगाकी, योनागुनी
ओकिनावामा, फेरीहरू ओकिनावा मुख्य टापु, मियाकोजिमा टापु, र ईशिगाकिजीमा टापु वरिपरि सञ्चालन गरिन्छ। यी तीन टापुहरू र प्रत्येक दुर्गम टापुहरू बीच त्यहाँ धेरै नियमित समुद्री मार्गहरू छन्। केहि उच्च-गति जहाजहरू पनि सञ्चालनमा छन्।
जहाजहरू ओकिनावा मुख्य टापु र कागुशिमाको बीच क्युशुको दक्षिणी छेउमा पनि सञ्चालन भइरहेका छन्।
ओकिनावामा मौसम र मौसम
ओकिनावा मुख्य टापुमा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु छ, मियाकोजिम र ईशिगाकिजीमा उष्णकटिबंधीय जलवायु हो।
ओकिनावा प्रान्त सबैतिर तातो र वर्षा भएको छ, र वार्षिक वर्षा २००० मिमी भन्दा बढी छ। वार्षिक औसत तापमान करिब २२ डिग्री सेल्सियस छ। तथापि, टोकियो र क्योटो विपरीत, अधिकतम तापमान विरलै 2000 22 डिग्री भन्दा बढी छ। यो किनभने ओकिनावा समुद्रले घेरिएको छ र तातो टापुको घटना घट्ने संभावना छैन।
ओकिनावामा वर्षाको मौसम हुन्छ जुन मेको सुरुदेखि जूनको मध्यसम्म हुन्छ। त्यस पछि, टाइफुनहरू प्राय: अक्टुबर सम्म हुन्छ। जब टाइफुन नजिक आउँछ, ओकिनावा हवाईजहाज र जहाजहरू रद्द गर्न बाध्य हुनेछ। यदि तपाईं त्यस्तो समयमा ओकिनावा जानुहुन्छ भने, तपाईंले रातमा होटलमा बस्नुपर्नेछ। गर्मी ओकिनावा धेरै अद्भुत छ, तर त्यहाँ टाइफुन क्षतिको जोखिम पनि हुन्छ। त्यसो भए कृपया भर्खरको मौसम पूर्वानुमान सुन्न कोसिस गर्नुहोस्।
ओकिनावा, जापान, मा जाजाम मा शार्टर्समा यात्रा गर्नका लागि प्रसिद्ध ठाउँ माञ्जमो केपको दृश्य
ओकिनावा मुख्य टापु टोकियोको १ 1500०० किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा अवस्थित छ। यो Kugoshima को Ky 650० किलोमिटर दक्षिण क्युशुको दक्षिणी छेउमा अवस्थित छ। ओकिनावा मुख्य टापु र कागोशिमा बीच फेरी सेवा छ। यसले एक दिन एकतर्फी लिन्छ।
किनभने ओकिनावा मुख्य टापु यति दक्षिणी छ, सबैभन्दा कम तापक्रम १ 14 डिग्री सेल्सियस पनि चिसो फेब्रुअरीमा छ।
ओकिनावामा त्यहाँ "Ryukyu" नामको राज्य थियो। यो राजवंश जापान मुख्य भूमि र चीन संग व्यापार संग समृद्धि। शाही महल "शुरी क्यासल" ओकिनावा मुख्य टापुको दक्षिणी भागमा थियो। यदि तपाईं ओकिनावा मुख्य टापुमा जानुहुन्छ भने, तपाईंले यस वंशको युगको भवन र संस्कृति देख्न सक्नुहुनेछ।
नाहा शहरमा, एक मोनोरेल नाहा एयरपोर्ट र शहर क्षेत्रको बीचमा चल्दछ। तर ओकिनवा प्रान्तमा यस मोनोरेल बाहेक कुनै ट्रेन छैन। त्यसोभए जब तपाईं ओकिनावाका लागि भ्रमण गर्ने ठाउँमा जानुहुन्छ, तपाईंले बस, कार भाडा इत्यादि प्रयोग गर्नु पर्छ।
ओकिनावा मुख्य टापुमा, समुद्री तटको विकास मियकोजीमा र ईशिगाकिजीमाको तुलनामा धेरै उन्नत छ, तर यदि तपाईं दक्षिणी शहरको भाग छोड्नुभयो भने तपाईं अचम्मको सुन्दर सागर भेट्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं बस वा भाँडा-कार प्रयोग गरेर यस्तो समुद्री तटमा जानुहुन्छ भने, त्यहाँ धेरै फोटोहरू हुनुपर्दछ जुन तपाईंले इन्स्टाग्राममा पोष्ट गर्न सक्नुहुनेछ!
कोकुसाइडोरी स्ट्रिट मेन रोड सडक नाहा शहरको बीचमा। यो व्यवसायिक जिल्ला हो त्यहाँ रेष्टुरेन्टहरू, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू छन्। र स्मारिका पसल = शटरस्टक
स्थानीय माछा र समुद्री खानाको पसल माकिशी सार्वजनिक बजार = शटरस्टकमा ग्राहकहरूसँग
कोकुसाइडोरी सडक नाहा शहरको बीचमा करीव १.1.6 किलोमिटरको मुख्य सडक हो। यहाँ स्मारिका पसलहरू, ओकिनावा मूल स्यान्ड्रीज पसलहरू, ओकिनावान भोजन व्यंजन रेस्टुरेन्टहरू, र यस्तै। यी पसलहरू राती अबेर सम्म खुल्ला हुन्छन्। यदि तपाईं यस सडकमा हिंड्नुभयो भने, तपाईंले ओकिनावाको संस्कृति महसुस गर्नुहुनेछ।
कोकुसाइडोरी स्ट्रिटमा, नाहा एयरपोर्टबाट एक मोनोरेल लिनुहोस् र केन्चोमे स्टेशन (प्रिफेक्चुरल अफिस स्टेशन) मा उतर्नुहोस्।
कोकुसाइडोरी सडकको बीचमा जानुहोस्, तपाईं आर्केड शपिंग क्षेत्र "Ichiba-hondori" मा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं त्यहाँ पुग्नुभयो भने, त्यहाँ एक बजार छ "माकिशी पब्लिक मार्केट"। यो पुरानो बजार सिफारिस गरिएको छ। तपाई यहाँ ओकिनावा मा सस्तो र स्वादिष्ट खाना पाउनुहुनेछ। त्यहाँ एउटा भोजन कोठा पनि छ।
>> कोकुसाइडोरी स्ट्रीटको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
>> माकिशी सार्वजनिक बजार को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
ओकिनावा, जापान = शटरस्टकमा शुरी क्यासल
अक्टुबर 31१, २०१dको बिहान, शुरी क्यासल (ओकिनावा प्रान्त), विश्व सम्पदा स्थलका अधिकांश भवनहरू जलाइयो। बिजुली प्रणालीमा समस्या भनेको आगोको कारण हो भन्ने विश्वास छ। ओकिनावाको एक पटक शान्तिमय राज्य थियो, यसको आफ्नै संस्कृति सहितको क्षेत्र ...
अक्टोबर 31१, २०१ 2019 को बिहान, शुरी क्यासलका अधिकांश भवनहरू जलाइयो। हाल पुनर्निर्माणको तयारी सुरु भएको छ। एक दिन, कृपया नयाँ शुरी क्यासल हेर्न आउनुहोस्!
नाहा शहर क्षेत्रलाई नहेर्ने पहाडमा शूरी महल छ। यो मोनोरेलको शुरी स्टेशनबाट १ 15 मिनेट पैदल छ।
शुरी क्यासलले रियुकु राज्यको राजा महल थियो जुन teen450० बर्षसम्म उन्नीसवीं सताब्दी सम्म चल्यो। यस महलमा आधारित, Ryukyu मुख्य भूमि जापान, चीन, र दक्षिण पूर्व एशियाई देशहरू संग व्यापार गरेको छ।
यो महल १ 1945 .1992 मा दोस्रो विश्व युद्धमा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो, तर यसलाई १ 2000 XNUMX २ मा पुनःस्थापित गरियो। र यो २००० मा विश्व विरासत साइटको रूपमा दर्ता भयो।
>> विवरणका लागि कृपया शुरी क्यासलको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
रक्षात्मक सुदृढीकरण र शुरी क्यासलको किल्ला पर्खाल = शटरस्टक
व्हेल शार्क र मुख्य ट्या tank्कमा विभिन्न प्रकारका माछा पौंडी, कुरोशियो सागर भनिन्छ, ओकिनावा चिराउमी एक्वैरियम, मोटोबु, ओकिनावा प्रान्त, जापान = शटरस्टकमा
ओकिनावा चुराउमी एक्वेरियम जापानमा सबैभन्दा लोकप्रिय एक्वेरियमहरू मध्ये एक हो। र यो ओकिनावाको सबैभन्दा धेरै प्रशंसा गरिएको आकर्षण मध्ये एक हो।
यस एक्वेरियमसँग "कुरोशियो सी" भनिने विशाल ट्या tank्की छ। यो meters 35 मिटर लामो, २ 27 मिटर चौडा, १० मिटर गहिरो छ। यस ट्या tank्कीमा, ha मिटर लम्बाई व्हेल शार्क पौंडीरहेको छ। थप रूपमा, विशाल मन्त्रा पनि बिस्तारै पौडीरहेका छन्।
यस बाहेक, त्यहाँ ट्याks्कीहरू पनि छन् जसले वास्तविक कोरल रीफहरू र ट्याks्कहरू अवलोकन गर्न सक्दछ जहाँ तपाईं समुद्री किनारमा २००- 200०० मिटरको पानीको गहिराईमा रहेको माछा देख्न सक्नुहुन्छ।
ओकिनावा चुराउमी एक्वेरियम ओकिनावा मुख्य टापुको उत्तरपश्चिम तटमा अवस्थित छ। यो नाहा एयरपोर्टबाट एक्सप्रेस बस द्वारा करीव hours घण्टाको हुन्छ। यो यदि तपाई कार भाँडामा लिनुहुन्छ भने २ घण्टा लाग्छ।
ओकिनावासँग धेरै वर्षाका दिनहरू छन्, तर यस एक्वेरियममा, तपाईं यो वर्षाको दिनमा पनि समस्या बिना नै मजा लिन सक्नुहुन्छ। त्यस बिन्दुबाट, यो एक्वेरियम सिफारिस गरिन्छ।
>> विवरणका लागि कृपया ओकिनावा चुराउमी एक्वेरियमको आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्
काइचू-डोरो कोजवे towards किलोमिटर महासागर, ओकिनावा, जापानमा जारी छ
यदि तपाईं कार भाडा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं ओकिनावा मुख्य टापुको एक सुन्दर सडकमा दौडिन चाहनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं ओकिनावाको मुख्य टापुको पूर्वी तटमा अवस्थित "Kaichu-doro Causeway" ड्राइभ गर्नुहोस्।
काइचू-डोरो कोजवे लगभग 4.7 किलोमिटरको सडक हो जुन ओकिनावा मुख्य टापु र नजिकका दुर्गम टापुहरूसँग जोड्दछ। काइचू-डोरो कोसेवे एक पूल होइन। यो सडक अलोचोमा बैंकहरू राखेर निर्माण गरिएको हो। त्यहाँ अन्य सडकहरू यस्तै प्रकारले बनाइएको छ, तर कैचु-डोरो कोजवे पूर्वी क्षेत्रमा सबैभन्दा लामो छ।
यदि तपाईं काइचू-डोरो कोजवेमा ड्राइभ गर्नुभयो भने, तपाईं समुद्रमा दौडेर गएको महसुस गर्नुहुनेछ। यो एक सुन्दर पन्ना निलो समुद्र हो जुन वरपर देख्न सकिन्छ। साँझमा, पुलले Kaichu-doro Cwayway सम्म पुग्दछ, त्यसैले तपाईं एक शानदार स्थानमा चलाउन सक्नुहुनेछ। काइचू-डोरो कोजवेको बीचमा, त्यहाँ विश्राम स्थान छ। तपाईं त्यहाँ स्मृति चिन्हहरू किन्न सक्नुहुन्छ र एक रेस्टुरेन्टमा खान सक्नुहुन्छ।
काइचु-डोरो काजवे नाहा एयरपोर्टबाट करीव kilometers० किलोमिटर टाढा छ। यदि तपाईं कार भाडा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो टोल रोड प्रयोग गरेर करिब १ घण्टा हुन्छ।
मियाकोजिमा टापुको नक्शा
मियाकोजिमा टापु ओकिनावा मुख्य टापुको २ 290 ० किमी दक्षिण पश्चिममा अवस्थित छ। टापु वर्षभरि न्यानो छ, वरपरका समुद्रहरू आश्चर्यजनक पारदर्शी छन्। यो टापु डाइभिंग र स्नोर्कलिंगका लागि अभयारण्य हो।
यदि तपाईं पौडी खेल्न र स्नोर्कलिंगको मजा लिन चाहानुहुन्छ भने यो जुलाईदेखि सेप्टेम्बरमा जानु उत्तम हुन्छ। यदि तपाईं समुद्रमा पौडिरहनु भएन भने, म अप्रिल र नोभेम्बरमा सिफारिस गर्दछु जब मौसम स्थिर छ र होटल बस्ने शुल्क र हवाई भाडा अपेक्षाकृत सस्तो छ।
मियाकोजिमा टापुमा म सिफारिस गर्न चाहेको समुद्र तटहरू योनाहा मेहामा बीच र सुनयमा बीच हो। मैले यी दुई समुद्री किनारहरूको बारेमा जापानी समुद्री तटमा निम्न लेखमा लेखेको थिएँ। कृपया ध्यान दिनुहोस् यदि तपाईंले आपत्ति गर्नुभएन भने।
>> Yonaha Maehama समुद्र तट र Sunayama बीच को विवरण को लागी कृपया यो लेख को संदर्भ गर्नुहोस्
यदि तपाईं बेरमै स्नोर्कलिंगको मजा लिन चाहानुहुन्छ भने, मियाकोजिमा टापुको पूर्वीपट्टि योशीनोकाइगन बिचमा जानुहोस्। मियाको एयरपोर्टबाट by 35 मिनेट कारमा अवस्थित, यस समुद्री तटमा नजिकै धेरै कोरल रीफहरू छन्। त्यहाँ कोरल द्वारा प्यारा उष्णकटिबंधीय माछा छन्।
यदि तपाईं बिरानोमा स्नोर्कलिंगको मजा लिन चाहानुहुन्छ भने, मियाकोजिमा टापुको पूर्वपट्टि योशिनोकाइगन बिचमा जानुहोस्। मियाकोजिमा एयरपोर्टबाट 35 XNUMX मिनेट कारमा अवस्थित, यस समुद्री तटमा नजिकै धेरै कोरल रीफहरू छन्। त्यहाँ कोरल द्वारा प्यारा उष्णकटिबंधीय माछा छन्।
मियाको एयरपोर्टले निम्न शहरहरूमा उडानहरू निर्धारित गरेको छ।
फुकुओका (गर्मी मात्र)
कबीरा खाडी जुन इशिगाकी टापु, ओकिनावा, जापान = शटरस्टकको उत्तरी तटमा अवस्थित छ
ईशिगाकिजीमा टापुको नक्शा
ईशिगाकिजीमा टापु एक रिसोर्ट टापु हो जुन हालसालै विश्वव्यापी रूपमा धेरै लोकप्रिय भएको छ। यो ओकिनावा मुख्य टापुको लगभग km०० किलोमिटर दक्षिणपश्चिममा पर्छ। ताइवानसँगको दूरी २ 400० किलोमिटर मात्र छ, त्यसैले ताइवानसँग नियमित उडानहरू सञ्चालन गरिन्छ। यसबाहेक, ह Hongक Kongसँग नियमित उडानहरू छन्। टोकियो र ओसाका र अन्यबाट प्रत्यक्ष उडानहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्।
ईशिगाकिजिमा टापु १ 160० किलोमिटर वरपर छ, र तपाई वरपरका समुद्रहरूमा धेरै कोरल रीफहरू देख्न सक्नुहुन्छ। मियाकोजिमा टापु जस्तै, यस टापु डाइभिंग र स्नोर्कलिंगका लागि अभयारण्यको रूपमा पनि चिनिन्छ। ईशिगाकिजीमा टापुमा 70० भन्दा बढी डाइभि shops शपहरू छन्।
ईशिगाकिजीमा सबैभन्दा लोकप्रिय दर्शनीय स्थलहरू कबीरा खाडी (कबीरावान) माथिको फोटोमा देखिन्छ। टापुको उत्तरी किनारमा रहेको यस खाडी उच्च पारदर्शिताका साथ आश्चर्यजनक रूपमा सुन्दर छ।
यद्यपि पौराण कबीरा खाडीका लागि असम्भव छ किनकि समुद्री प्रवाह धेरै छिटो छ। यहाँ, शीशाको डु boat्गा जसको डु boat्गाको तल पारदर्शी छ संचालन गर्दैछ, त्यसैले म तपाईंलाई यो डु on्गामा सवारी लिन सिफारिस गर्दछु। यो खाडी यसको अद्भुत सूर्यास्तको लागि पनि परिचित छ। कृपया सुन्तलाको आश्चर्यजनक दृश्य हेर्नुहोस्।
यसका साथै, म तपाईंलाई ईशिगाकिजीमा सिफारिस गर्न चाहान्छु स्थान टेकटोमिजिमा टापु नजिक छ।
टेकटोमिजिमा टापु, फेरी द्वारा १० मिनेटमा अवस्थित, कोन्डोई बीच नामको अद्भुत समुद्रतट छ। यो समुद्री तट एकदम शान्त र शुद्ध ठाउँ हो। टेकटोमिजिमा टापु पनि धेरै सुन्दर टापु हो जहाँ परम्परागत घरहरू छोडिएका छन्।
मैले निम्न लेखमा कोन्डोई बीच र टेकटोमिजिमा टापुको बारेमा लेखें, त्यसैले कृपया यदि आपत्ति गर्नुहुन्न भने कृपया ड्रप गर्नुहोस्।
>> कोन्डोई बीच र टेकटोजिमिमाको विवरणहरूको लागि, कृपया यो लेख हेर्नुहोस्
टेकटोमिजिमा टापु जहाँ परम्परागत रातो टाईल घरहरू खडा गरियो = शटरस्टक
ईशिगाकी एयरपोर्ट (आधिकारिक नाम शिन ईशिगाकी एयरपोर्ट हो) का निम्न शहरहरूमा उडानहरू निर्धारित गरियो।